About | WatercolorPNG
Laba saaxiib oo Andrey iyo Vadim, oo leh asal ah farshaxan farshaxan, naqshadeynta iyo horumarinta ganacsiga ayaa abuuray WatercolorPNG in 2016. Ulajeedadeenu waa inaan ku xirno farshaxanno tayo leh oo reer Ukrain ah oo leh ereyo dhijitaal ah oo u oggolaanaya inay iibiyaan sheekooyinka sawir-gacmeedyada adduunka oo idil. Waxaan ku bilownay abuurista muuqaalka iyo bilooyin badan oo shaqooyin ah ka soo ururiyay sawirro farshaxan ah oo ku saabsan mawduuca botanical.
Waxaan abuuray dukaankeenna si toos ah badeecadeena u siiyaan suuqa waxayna dadka ka caawiyaan in ay qurxiyaan naqshadoodooda heer heer sarre ah oo qiime jaban. Waxaan abuureynaa badeecooyin dhijitaal ah sidaa daraadeed naqshadeeyayaashu si dhakhso ah ayey u soo dejisan karaan una abuuri karaan iyaga asalka, qoraalka, qaababka xargaha, xuduudaha ama xuduudaha.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama haddii aad leedahay codsi naqshad gaar ah, kaliya noo soo sheeg.